12 qaab oo lagu garto fikirka iyo dabeecadda xun
Home Iskumaan 12 qaab oo lagu garto fikirka iyo dabeecadda xun
Haddii aragti ama fikrad fiican aysan maskaxdaada ku jirin, ogow mid kale oo khaldan ayaa meesha bannaan buuxin doonto. Haddaba la saaxiib fikradaha wanaagsan!
Aragtida ama fikradda xun ma ahan kuwo wanaagsan. | CREDIT: unbridling
Fikirka xun wuxuu mararka qaar yimaadaa adigoo aan ka warhayn, wuxuuna keenaa dabeecado iyo akhlaaq xun. Balse hadda ma ogaan kartaa arrimaha aadan weligaa ku fikirin in ay niyaddaada ku soo dheceen ee xun?
Garashada fikirka xun waxaa lagu fahmi karaa in waxyaabo qarsoodi ah oo maskaxdaada ku soo dhaca si aan ku talagal ahayn – haddii aad u fiirsato waad fahmi kartaa, waxaadna sameysan kartaa nolol caafimaad iyo wanaag leh.
Waa suuragal in qofka uu wax ka bedelo fikirradiisa khaldan ee saameynaya dareenka iyo dabeecadda, balse marka hore waa in qofka uu barto sida lagu garto fikirka xun, loogana hortago.
Astaamaha fikirka khaldan
Si toos ah – Si lama filaan ah ayey maskaxda ugu soo dhacaan, adigoo wax dadaal ah ku bixinin in fikirkaas aad keento
Dhalan rogan (bedelan) – Waa wax aan qeyb ka noqon Karin xaqiiqada, ama waana khaladba fikradahaas
Waxba ma soo kordhiyaan – Fikradaha xun waxay saameynayaan qaabka aad dareemeyso iyo dabeecadahaaga. Waxay kugu adkeynayaan in aad gaarto guusha aad fileyso ee adduun iyo aakhiraba.
Wax la rumeysan karo – Haddii ay kugu bataan, marka dambe waxay fikradaha xun kula noqonayaan xaqiiqo, mana is weydiineysid waxa ay yihiin.
Dhuulaameysi iyo khalalaaso – Fikradaha khaldan ma ahan wax ad adiga dooraneyso, waa khalalaaso iyo dhuumaaleyso maskaxda kuu dabamaraya, mararka qaarna way adag tahay in la joojiyo.
Sida aad ku garan karto fikradaha xun
Dhammaan ama fikir la’aan – Wax kasta in intooda xun ay kuu muuqato, oo aadan arkin inta wanaagga ah ee fiican – ma jiro wax u dhexeeyo naceyb iyo jaceyl, sida ay qofka fikirka xun la tahay.
Wax guud aad ka dhigto – Marka wax khaldan aad aragto in wixii arrintaa qeyb ka ahba in ay kula khaldanaadaan. Tusaale, in guuldarada hal mar ay kula noqoto wax markasta ah.
Sifeynta maskaxda – Waa in aad la soo baxdo hal khalad, kaasna aad diiradda saarto, adigoo aan eegin wixii kale wanaag ahaa ee dhacay ama dhici lahaa. Tusaale, sheekada qof in aad kala baxdo halka eedeyn, iskana ilawdo 20-ka amaan.
Qiimo dilka wanaagga – Waa in aad garato wax wanaagsan oo noloshaada soo maray, haddana aad u aragto wax aan muhiim ahayn oo xiriirba kula kalayn.
In go’aanka ugu dambeeya aad ku boodo – Waa sida in aad qaadatay fasiraadda khaldan, adigoo xaqiiqada aanan eegin, ka dibna go’aan sidaa ku gaara.
Akhrinta maskaxda – In fasiraad khaldan oo kuu gaar ah aad iska sameysato oo ku saabsan waxa suuragalka ah eek u jira maskaxda dadka kale. Adigoo iska dhigaya in aad fahmeyso wixii maskaxdooda ku jira.
Qof nasiibka garan karo – In aad is tusto in xaaladda ay xumaan doonto, ka dibna aad dareento in saadaashaada ay tahay mid sax ah oo xaqiiqo ku saleysan.
Waynayn – Buunbuuninta waxyaabo gaar ah sida khaladaadka, ama qof kale guushiisa oo kula khaldan
Liididda ama yareynta – Qiimo dilka muhiimdda ay leeyihiin dhacdooyiinka iyo xaaladaha wanaagsan iyo tayada fiican.
Kaamilnimada ama dhameystirnaanta (Ujeedooyiin aan macquul ahayn) – Waxaad isku dhiiragelisaa, ‘waa in aan’ ama ‘waxaa waajib igu ah’. Haddii waxa ay noqon waayaan sidii aad rabtay, waxaad is dareemsiineysaa niyad-jab. Ka dib dad kale ayaad khaladkaaga u saareysaa, waad xanaaqeysaa, jahwareer na waad dareemeysaa.
Aadeynta naftaada – Waxaad isu arkeysa in aad masuul ka tahay Khaladaadka arrimo kaa baxsan oo aadan shaqo ku lahayn. Waxaadna mararka qaar diideysaa wixii aad masuulka ka ahayd.
Is-duleyn – In naftaada aad ku xirto wax xun iyo dabeecado aan wanaagsanayn. Tusaale, in aad is dhahdo ‘waan xumahay’ ama ‘wax wanaagsan uma qalmo’, ‘ daciif baan ahay’, ‘la iguma kalsoonaan karo’, iyo wixii la mid ah.
Haddii aad isku aragto ugu yaraan seddax ka mid ah arrimahan, haddaba ogow waxaad dhibane u tahay fikradaha xun. Xusuusnow, arrintan ma ahan mid aan ogtahay inta badan, marka way adag tahay in aad is garato.
Inta badan dadka way dhacdaa in mararka qaar ay isku argaan fikir aan wanaagsanayn, balse marka ay joogto noqoto, waa xilliga ay xaaladda xumaaneyso. Haddaba iska gaar!
Previous articleTurkiga ma wuxuu sameysanayaa hub aan dunida laga heysanin?
Next article5 sababood oo ay qaxwada subixii uga fiican tahay shaaha